Random Articles in Nepali index
This webpage is designed and launched just for sharing some of my thoughts, experiences, interactions, activities etc. All the write ups are outcome of interaction with the society, friends, the world at large, reading books, thinking on the issues from different perspectives. It does not include anything that has
'कार्यशैली' शब्द 'कार्य' र शैली दुई भिन्न शब्दहरु मिली बनेको हो। कार्यको अर्थ काम र शैलीको सामान्य अर्थ तरीका भन्ने बुझिन्छ। सामान्य अर्थमा काम गर्ने तरीकालाई नै कार्यशैली भनिन्छ। संसारमा हरेक व्यक्तिले केही न केही काम गरिरहेको हुन्छ। गतिशिल संसारमा रहेका गतिशिल मानिसहरु आ–आफ्नै काम गरिरहन्छन्। झट्ट हेर्दा कुनै एउटा व्यक्ति बेकाम जस्तो लाग्न सक्छ तर वास्तवमा उसले पनि कुनै न कुनै काम गरिरहेको हुन्छ। विद्यार्थीले पढ्नु, व्यापारीले कारोबार गर्नु, कलाकारले चित्र कोर्नु, चालकले गाडी हांक्नु, कुचिकारले सरसफाइ गर्नु, बैज्ञानिकले अनुसन्धान गर्नु, समाजसेवीले समाज तथा मानव सेवा गर्नु, चोरले चोरी गर्नु, ठगले झुक्याउनु लगायत सबै कामहरु हुन् र संसारका कुना कुनामा छरिएर रहेका मानिसहरु त्यस्ता अनगिन्ती कामहरु गरिरहेका हुन्छन । कुनै सुकाम होला त कुनै कुकाम हुन सक्छन्। झट्ट हेर्दा सकारात्मक र नकारात्मक वीच केही कुनै असर नहुने तटस्थ कामहरु पनि हुन्छन् जस्तो लाग्छ तर वास्तविकतामा त्यसो हुदैन। विज्ञानको सामान्य नियम अनुसार पनि हरेक कृयाकलापको कुनै न कुनै नतिजा आउँदछ। सो नतिजा कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई कुनै एउटा समय र सन्दर्भमा सकारात्मक वा नकारात्मक लाग्न वा हुन सक्छ। त्यही काम भिन्न व्यक्ति समय र सन्दर्भमा अर्कै प्रकारको हुन सक्छ।
हरेक व्यक्ति स्वभाविक रुपमा राम्रो काम गर्न चाहन्छ। नराम्रो काम गरी धर्म, संस्कृति, चलनचल्ती, घर, परिवार, समाज, शुभचिन्तक, राज्य, कानुनको सामु आफूलाई खराब वा दोषी बनाउन कुनै पनि व्यक्तिले चाहदैन । तर कहिले कहीं परिस्थिति यस्तो आउँछ कि मानिसले नचाहेर पनि गलत काम गर्न पुग्छ। त्यसरी केही गरी गलत काम हुन गएमा गलत गर्नेले प्रायश्चित गर्न सक्नु र त्यसबाट आउने दिनहरुमा पुनः त्यस्तै गल्ति नदोहोरिने गरी आफूलाई सच्याउनु उसको महानता हुन्छ। 'जीवन पुरै एउटा विद्यालय हो भने हरेक घटना एउटा पाठ हो' भनी सोच्नेले गल्तीबाट सिकेर अघि बढ्न सक्छ। त्यसै गरी अरुले गरेको गल्तीबाट पिडित हुनेले दुईवटा मुख्य धर्म निभाउन सक्छ। एउटा त उसलाई माफी दिन सक्नु पर्छ, साथै उसले गरेको गलत कामबाट आफूलाई के असर परेको छ, त्यसलाई आफूले कसरी लिएको छ प्रष्ट पार्नु र त्यसबारे उसको मत वा स्पष्टिकरण माग्नु पनि अर्को धर्म हो। यसो गर्दा पीडक पक्षले आफूले गरेको काम वा गल्तिको पूनर्मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउँदछ र आफूलाई परिमार्जन गरी राम्रो काम तर्फ लगाउन सक्दछ। कुनै काम आफूलाई राम्रो लाग्ने हुन्छ त कुनै काम अरुलाई राम्रो लाग्ने हुन्छ। कुनै काम यस्तो पनि हुन्छ, जुन आफू र अर्को दुवैलाई राम्रो लाग्दछ। अरुलाई मात्र राम्रो लाग्ने काम सूनीति भन्न सकिन्छ भने आफूलाई मन पर्ने कामलाई सूरुची भन्न सकिन्छ। सूनीति र सूरुची दुवै गुण समेटिने कामहरु उत्तम हुन्छन्। वास्तविक व्यवहारमा एउटै काममा सूनीति र सूरुची हुनु असम्भव त होइन तर गाह्रो छ। सीमित आदर्श व्यक्तिहरुले मात्र सूनीति भित्रै आफ्ना सूरुची भेट्टाएका हुन्छन्।
जसरी काम राम्रो-नराम्रो हुन्छ, त्यसै गरी त्यो काम गर्ने शैलि पनि राम्रो वा नराम्रो हुन सक्दछ। कुनै एउटा विशेष काम फत्ते गर्ने प्रकृया वा तरीका नै शैली हो। शैलीको महत्व कर्तालाई भन्दा तेस्रो पक्षलाई बढी हुन जान्छ। केही मान्छे यस्ता हुन्छन् जो काम त राम्रो गर्छन् तर शैली राम्रो हुँदैदैन। कामको प्रकृया, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग गर्ने भाषा, कार्य सम्पादनमा प्रयोग गर्ने साधन, सहयोगीहरु, कार्य सम्पादन समय आदि जस्ता तत्वहरुले शैलीको विकासमा सामुहिक योगदान गरेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि एउटा शिक्षकले पूर्ण ज्ञान दिने गरी पढाउँछन् तर विद्यार्थीले सामान्य कमजोरी गर्दा पनि हप्काउँछन् वा पिट्छन् भने यहाँ कार्य त उत्तम छ तर शैली राम्रो देखिएन। एउटा व्यक्तिले कस्तो शैली अवलम्वन गर्दछ भन्ने कुरा उसको अनुभव, ज्ञान, व्यक्तित्व, विश्वास, वातावरण, परिवेश, धर्म, संस्कृति, पृष्टभूमी, उमेर, शिक्षा, परम्परा, अवस्था, आवाश्यकता, सम्वन्ध, पूर्वावस्था आदि जस्ता तत्वहरुले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
कार्य र शैलीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा व्यक्तिलाई चार प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। (क) राम्रो कार्यलाई राम्रो शैलीमा गर्ने (ख) राम्रो कार्यलाई नराम्रो शैलीमा गर्ने (ग) नराम्रो कार्यलाई राम्रो शैलीमा गर्ने र (घ) नराम्रो कार्यलाई नराम्रो शैलीमा गर्ने। प्रकार (क) को व्यक्ति सर्वोत्तम हो जसले राम्रो काम राम्रो शैलीमा गरिरहेको हुन्छ जसका कारण ऊ वाहेकका व्यक्तिहरु पनि लाभान्वित भईरहेका हुन्छन् र ऊ पनि खुसी हुन्छ। शैली राम्रो भएको कारण बाहिरका व्यक्तिहरुले उसले गरेको राम्रा काम तुरुन्त बुझ्दछन् र त्यसलाई आत्मसात र प्रशंसा गर्दछन् जुन सबैका लागि महत्वपूर्ण छ। कामको नतिजा आउन र त्यसको वास्तविक असर वा प्रभाव बुझ्न समय लाग्दछ। तसर्थ यो दु्रतगतिको संसारमा मानिसहरुले तुरुन्त हेर्ने भनेको शैली नै हो। तर यो विधीमा कार्य र शैली दुबै राम्रो भएकोले त्यस्तो कामको असर तत्काल पनि राम्रो देखिन्छ र दीर्घकालसम्ममा पनि राम्रो हुन्छ। प्रकार (ख) एउटा यस्तो सम्मिश्रण हो जहाँ कर्ताले कार्य राम्रो गर्छ तर शैली भने नराम्रो हुन्छ। वास्तवमै भन्ने हो भने त्यस्ता व्यक्ति मूर्ख हुन्। राम्रा काम गरेर अरुलाई सकारात्मक नतिजा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् तर खराब शैलीका कारण आफैलाई भने पछि धकेलिरहेका हुन्छन्। राम्रो काम गर्ने क्रममा र त्यसबाट उत्पन्नहुने सकारात्मक प्रभावले दिने सन्तुष्टिका कारण व्यक्तिले या त शैलीलाई वास्ता नै गरेको हुँदैन या त त्यसलाई त्यति महत्व दिएको हुँदैन। उसको एउटा गहिरो विश्वास हुन्छ कि मैले राम्रो काम गर्छु भने किन दुनियाँलाई राम्रो लाग्ने गरी राम्रो देखाएर गर्नु पर्‍यो? बाह्य व्यक्तिहरु राम्रो कामको दीर्घकालिन र आन्तरिक पक्ष नियाल्नु अघि झट्ट शैलीमा ठोकिन पुग्छन् र त्यो शैली नराम्रो भएमा कार्यको वास्तविक तह सम्म पुग्दै पुग्दैनन्। यसरी कैयौं राम्रा मानिसहरुले गरेका र गर्न सक्ने राम्रा कामहरु बीचैमा तुहिएर जाने वा निस्प्रभावी हुने गर्दछन्। समाजले फड्को मार्न नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो। त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति पनि तेश्रो पक्ष वा अरुले उसको शैली होइन कार्य मन नपराएको भन्ने मिथ्यामा पर्दछ र अरु राम्रो काम गर्नबाट विमुख भई जान्छ। जुन कसैकालागि पनि राम्रो होइन। प्रकार (ग) सवै भन्दा खतरापूर्ण छ। काम नराम्रो वा नकारात्मक गरिरहेको हुन्छ तर अरुले हेर्दा राम्रो देखिने शैलीमा गर्दछ। अरुलाई नोक्सान वा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ तर आफ्नो छवी सकारात्मक वा राम्रो देखाइरहेको हुन्छ। राम्रो शैलीको खोलमा नराम्रो काम पोको पारी बेचिरहेको हुन्छ। नराम्रो कामले सृजना गर्ने नकारात्मक प्रभाव आउन समय लाग्छ। तब सम्म उसले ठूलो नोक्सान पुर्‍याइ सकेको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरुलाई चिन्न गाह्रो हुन्छ र बच्ने गर्नुपर्दछ। प्रकार (घ) त यसै पनि सबै हिसावले नराम्रो भइगयो। यसबाट त सबैजना बचेर हिँड्ने कोशिस गरिरहेकै हुन्छन्। समग्रमा हामी सबैले राम्रो कार्य त गर्न पर्छ नै साथै राम्रो शैलीमा पनि गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो 'कार्यशैली' नै राम्रो होस्। प्रभावशाली कार्यशैलीका कारण आफूभित्रको व्यक्तित्वले अवतरण गर्ने अवसर पाउँछ, जुन कुरा हामी सहजै समाजमा लागु गर्न सक्छौ, आजै, अहिल्यै र यहिबाट कार्यशैलीको मनन् –अभियान गर्न सक्छौ ।